iPhone 12 Vagadziri - China iPhone 12 Fekitori & Vatengesi
iPhone 12 yakateedzana kamera lens girazi dziviriro
Maitiro Ekusarudza Yakanakisa Kamera Lens Girazi Dziviriro ye iPhone 12 nhevedzano?
Zvishandiso zvitsva zveApple ndezvechokwadi kubata kune ziso nehupamhi mafoni ekuratidzira uye yakafara kamera module kumashure. Nekuwedzera kwoumbozha uye hupfumi ndiko kudikanwa kwekuchengetedzwa kwakaringana. Uye, kana zvasvika pakutarisira kamera module pane iyo iPhone 12 nhevedzano, kuendesa nzira dzakanakisa kwakakosha.
2.5D Matte Screen Dziviriro ye iPhone 12 akateedzana
OTAO yakakwira kujekesa matte yakadzikama girazi screen chengetedzo ine anti-kuratidzira basa iro rinogona kunyatso rwisa kubva kune inokuvadza glare uye kudzikisira mwenje kuratidzira kuchengetedza maziso.